Umhlahlandlela Wokusebenzisa i-imeyili yakho uvule, uchofoze phakathi, kanye namanani wokuguqulwa | Martech Zone
Umhlahlandlela Wokusebenzisa i-imeyili yakho uvule, uchofoze phakathi, kanye namanani wokuguqulwa
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ingxoxo eyodwa enginayo njalo ngesonto namakhasimende izindlela eziqhubeka zikhungathekisa zokwakha nokugcina uhlelo lokuthengisa lwe-imeyili oluyimpumelelo. Kalula nje, njengoba uhlu lwakho lokumaketha lwe-imeyili lukhula, kanjalo nekhanda lakho lokuhambisa. Kubukeka sengathi abahlinzeki bezinsizakalo ze-intanethi balahle noma yiliphi ithemba lokuvuza ngemikhuba emihle futhi banama-algorithms ayizimungulu aqhubeka nokujezisa abathumela okuhle.
Isibonelo, omunye wozakwethu embonini uthole i-Yahoo! uvimba i-imeyili yakhe eyi-100% - yize inkundla yakhe inamathela kuyo yonke into indinganiso esezingeni lomkhakha nokwenza okuhle kakhulu kufakwe ohlwini yi-Yahoo! umphathi weposi. Njengokuhlolwa, wahambisa ukudluliswa kweposi lakhe kukheli elisha le-IP futhi ama-imeyili akhe aqala ukudlula ngaphandle kwenkinga. Okuqukethwe okufanayo, ababhalisile abafanayo, ikheli elihlukile le-IP. Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi ama-ISP avele avimbe amakheli e-IP ngezikhathi ezithile ukubona ukuthi inkampani iyaphendula yini. Okungenani i-Yahoo! awenqabile ama-imeyili, kepha… amanye ama-ISP amaningi avele awahambise aye kufolda engenamsoco kumthumeli.
Yiqiniso, zikhona imeyili ukumaketha amaphutha ongakugwema ngenkathi udala uhlu lwakho nokuqukethwe. Futhi, kunezindlela eziningi zokwandisa i-imeyili yakho. Lokhu infographic, AmaHacks Wokwenza Ukuthengisa Nge-imeyili kanye Nezifundo Zezifundo, kusuka 99Firms imininingwane izindlela eziningi zokwenza kahle. Angiyena umlandeli omkhulu wethemu Hack… Ngithola ukuthi zonke lezi zindlela zikufanele ukuhlolwa ngohlelo lwakho lwe-imeyili.
Izindlela Zokusebenzisa Nge-imeyili Zifaka
Ukusebenziseka Komugqa Wesihloko - Ama-algorithms nokuziphatha kwababhalisile kwenze umugqa wesihloko waba yisici esibucayi kakhulu sokuthola i-imeyili ifihliwe noma ichofoziwe. Izinkampani eziningi zifaka phakathi emoji kanjalo.
Umbhalo Wokuqala - Ngenkathi sithatha indawo yombhalo wethu wangaphambili we-static newsletter ngombhalo oshukumisayo owakhiwe kusuka kokuqukethwe kwethu kwezindaba, sabona ukwanda ngokushesha kokubekwa kwebhokisi lokungenayo namanani avulekile. Abantu bafunda ukubuka kuqala - sisebenzise lokho!
Isibongo Sender - Abantu baseMelika abangama-68% bavula ama-imeyili abo ngokususelwa ku- "Kusuka Igama" abakubonayo. Ngabe igama lakho elivela egameni lakho limele inkampani yakho kahle? Ingabe iyafana nekheli lakho le-imeyili?
Izigaba - Ukuhlukanisa uhlu lwakho lokumaketha nge-imeyili nokuqukethwe okuqondisiwe kushayela imiphumela emangalisayo kepha kuvame ukunganakwa ngenxa yobunzima obubandakanyekayo. Kuwufanele umzamo futhi amapulatifomu amaningi wokumaketha e-imeyili ayayisekela.
Ukwenza okuthandwa nguwe - Dlulela ngale kokuthi [Faka Igama Lokuqala] bese unikezela ngemininingwane emkhankasweni wakho we-imeyili eqondene ngqo nomlando wobhalisile kanye nomlando wakho wokuthenga. Abathumeli be-imeyili babone ukwanda kwemali engu-92% kanye nezinga lokuguqulwa kabili lapho ama-imeyili enziwe aba ngewakho.
Ukuzenzekelayo kanye nokubangela - Isikhathi siyikho konke, ngakho-ke ukuthola i-imeyili kususelwa kulokho okulindele noma ekuziphatheni kwekhasimende kubalulekile ukuqhubekisela phambili ubudlelwano.
Izinkinobho nezingcingo ezenzelwa - Uma uthwebule i-imeyili yakho njengekhasi lokufika, ngabe kukhona ukubizelwa esenzweni ukushayela lowo obhalisile esinyathelweni esilandelayo sokuzibandakanya nomkhiqizo wakho? Uma kungenjalo, ulahlekelwa yithuba elikhulu lokuthuthukisa i-imeyili yakho.
Izithombe - Amabhokisi wokungenayo amatasa, ngakho-ke ukulindela umuntu obhalisile ukuthi afunde wonke amagama aqoshwe ngokucophelela owafakile ku-imeyili yakho kungenzeka ukuthi angenzeki. Khulisa ukuzibandakanya nokuchofoza ngokunikela ngezithombe eziphoqayo ukuheha obhalisile ukuthi afunde futhi achofoze. Faka ama-GIFs e-animated ukuze ungeze ubuhle obuthile!
Ividiyo - Ngenkathi amapulatifomu amaningi e-imeyili engayisekeli ngokugcwele ividiyo, okungenani unganikeza isithombe-skrini sevidiyo yakho ngenkinobho yokudlala. Lapho obhalisile echofoza inkinobho yokudlala, balethe ekhasini elizenzele ividiyo ngokuzenzekelayo!
Ukwesaba Ukuphuthelwa (FOMO) - ukudala umuzwa wokuphuthuma ezungeze ama-imeyili akho kungashayela amanani avulekile namanani wokuguqulwa kakhulu. Ngiyakuthanda ukufaka ukugqwayiza kokubala phansi ukushayela ekhaya into yokuthi kukhona ukuphelelwa yisikhathi okuhambisana nokunikezwayo.
uhlelo lwezikhathi - Khohlwa isikhathi esihle sokuthumela umbhedo. Hlola izikhathi ezahlukahlukene zokuthumela ze-imeyili yakho bese uyithumela lapho yenza umehluko omkhulu kakhulu. Ungase ufise ngisho nokuhlukanisa bese uyantengezela ukuthumela ngokuya ngezindawo zesikhathi.
Ukuphendula Kwamaselula - I-42% yawo wonke ama-imeyili ayavuleka avela kudivayisi ephathekayo. Uke wayihlola i-imeyili yakho ukuze ubone ukuthi ibukeka kanjani kuselula? Ungahle umangale, noma wethuke, ngomthelela we-imeyili yeselula eyakhiwe kabi.
Okuqukethwe kwe-imeyili - Izinga lokufundwa nobude bekhophi kungaba nomthelela kumazinga akho wokuchofoza nokuguqulwa.
Ukufometha i-imeyili - Wake wazama ukuthumela i-imeyili yombhalo kune-imeyili ye-HTML ukubona ukuthi umehluko wempendulo uyini? Ngenkathi ama-imeyili we-HTML engaba mahle, angahle angatholi ukunakwa okwenziwa yi-imeyili yombhalo!
Nayi i-infographic ephelele, kanye namaqiniso amnandi nezibalo kulo lonke!
Tags: isikhathi esihle sokuthumelai-imeyili ezenzakalelayoizinkinobho ze-imeyiliukubizelwa esenzweni nge-imeyiliOkuqukethwe kwe-imeyiliukufometha i-imeyiliizithombe ze-imeyiliuhlelo lokuthengisa nge-imeyilii-imeyili nokwenza kahleukwenza ngezifiso i-imeyilii-imeyili eyinhlokoukuhlukaniswa kwe-imeyilithumela izikhathi ze-imeyilii-imeyili iyathumelaumbhalo we-imeyiliukuqala kwe-imeyiliividiyo ye-imeyiliukwesaba ukulahlekelwafomokusuka egamenihtml imeyiliiphephandabaukuthuthukisai-imeyili yombhalo engenacalaumbhalo wangaphambi kwesikhathiigama lomthumeliumugqa wesihlokotesting
Uhlu Lokuhlola Lokuhlela Umkhankaso Wokukhangisa: Izinyathelo Eziyi-10 Zemiphumela Ephakeme
I-SEOReseller: I-White Label SEO Platform, Ukubika, kanye Nezinsizakalo Zama-ejensi